एक-दुई होइन चौध प्रेमिका | Home
एक-दुई होइन चौध प्रेमिका
Posted on December 20, 2009 by Yonepal	घर अगाडि भएको कार दुर्घटनाबाट सामान्य चोट लागेका गल्फ खेलाडी टाइगर उडको वैवाहिक जीवन सोही दुर्घटनाका कारण नराम्रोसँग घाइते भएको छ । गत नोभे म्बर २७ तारिख राति आफ्नै निवासबाहिर भएको दुर्घटनालाई प्रहरीले सामान्य दुर्घटना ठहर गर्दै उडले मदिरा सेवन नगरेको र अरू कसैको मानवीय क्षति पनि नपुर्‍याएको ठहर गर्दै कुनै कानुनी कारबाही अघि बढाएन । यद्यपि दुर्घटनाको कारण मदिरा सेवन नभएर उडकी प्रेमिकाको विषयलाई लिएर श्रीमतीसँग भएको झगडाको झोक भएको समाचार प्रकाशमा आएपछि उडको वैवाहिक जीवनमा दुर्घटना मच्चिने क्रम रोकिएको छैन ।
प्रेमिकाहरूको विषयलाई लिएर उड र श्रीमती एलिन नोरडेग्रेनका बीच झगडा हुने गरेको तथा दुर्घटनाको राति पनि सोही विषयलाई लिएर उड दम्पतीबीच चर्काचर्की भएको बताइन्छ । चर्चित व्यक्तिहरूको गोप्यता भंग गर्ने बेवसाइट टिएनजेड डटकमले उडको कार दुर्घटना हुनुअघि एलिन र टाइगरबीच न्युयोर्कको नाइट क्लबकी रसेल उचिटेल नामक भीआईपी होस्टेसको विषयलाई लिएर विवाद भएको समाचार प्रकाशमा ल्यायो । उक्त वेबसाइटमा समाचार प्रकाशन भएलगत्तै उडले गोप्य रूपमा सम्बन्ध राखेका महिलाहरूको बाढी नै आउन थाल्यो । यो क्रम गत साता यसरी बढ्यो कि २४ घन्टाको अवधिमा उडले आफूसँग गोप्य शारीरिक सम्बन्ध राखेको तथा आफूलाई एलिनपछिको प्रेमिकाको दर्जा दिएको बताउने महिलाहरू नै ६ जना भए । उडको जीवनमा आएका महिलाहरूको संख्या दिन-प्रतिदिन यसरी बढ्दैछ कि अहिले उडसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेको बताउने महिलाहरूको संख्या बढेर १४ नाघ्ने अवस्था छ ।
गल्फको शीर्ष स्थानमा रहेका टाइगर उड विश्वका समकालीन खेलाडीहरूमध्ये सर्वाधिक शालीन देखिन्छन् । विश्वका गल्फ खेलाडीहरूको सँचीमा आफूलाई शीर्ष स्थानमा उभ्याउन सफल उडको चर्चा महान् खेलाडीका रूपमा हुन्थ्यो । श्याम वर्णका उड सधैं शालीन देखिन्थे । मुस्कुराउँदा अत्यन्त भद्र देखिने उडको भित्री रूप यस्तो छ भन्ने कल्पनासमेत कसैले गरेका थिएनन् । विवाहअघि कुनै पनि सेक्स स्क्यान्डलमा नमुछिएका साथै प्रेमिकाहरूका कारण पनि चर्चामा नआएकाले उडलाई महान् खेलाडीहरूको सँचीमा राखिन्थ्यो । सन् २००४ मा एलिनसँग विवाह गरेपछि आफूलाई असल श्रीमान्का रूपमा प्रस्तुत गरेका उडले घर र गल्फ कोर्सलाई उत्तिकै माया गरेको सार्वजनिक छवि प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । यो बाहिरी छवि विपरीत एकपछि अर्को गर्दै गोप्य सम्बन्धहरू सार्वजनिक हुन थालेपछि उड अहिले आफ्नो जीवनको कठिन मोडबाट गुजि्ररहेका छन् । हाल एकपछि अर्को गर्दै देखा परिरहेका सेक्स स्याक्यान्डललाई उडले सही निकास दिन सकेनन् भने उनी विश्व खेलकुदको इतिहासमै सर्वाधिक कलंकित खेलाडी ठहरिनेछन् ।
न्युयोर्कको नाइट क्लबमा भीआईपीहरूका लागि वेट्रेसको काम गर्ने रसेल उचिटेलसँग उडको प्रेम रहेको र तिनै महिलाको विषयलाई लिएर उड र एलिनबीच विवाद भएको घटनाबाट टाइगर उडको सेक्स स्याक्यान्डल प्रारम्भ भएको थियो । रसेलसँगको प्रेम सार्वजनिक भए पनि उडले रसेललाई उनीहरूको प्रेमलाई गोप्य राख्न अनुरोध गरेका थिए । उडको आग्रहअनुसार रसेलले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिइनन् । उडले आफ्नो वैवाहिक जीवनमा कुनै किसिमको आँच नआओस् र आफ्नो छवि नबिगि्रयोस् भनेर गरेको आग्रहलाई रसेलले तत्काल रोके पनि उडले उनीपछिका प्रेमिकाहरूलाई भने रोक्न सकेनन् । रसेलको नाम सबैभन्दा अगाडि आउँदा उनले आफू उडकी प्रेमिका भएको कुरा अस्वीकार गरेकी थिइन् तर लगत्तै अर्की ककटेल बेट्रेस जेमी ग्रुबले उडसँग विगत तीन वर्षदेखि प्रेम रहेको कुरा सार्वजनिक गरिन् । उक्त प्रेम कैयौं पटक शारीरिक सम्बन्धमा परिणत भैसकेको थियो । ग्रुबले पनि एलिनपछि आफू नै उडकी प्रेमिका भएको महसुस गरेकी थिइन् । उनले पनि उडले आफूलाई धोका दिएको महसुस गरिन् । उनलाई पनि उडले तत्काल आफ्नो सम्बन्धका बारेमा नबोल्न आग्रह गरे । रसेल र जेमीको चर्चा नसेलाउँदै उडको जीवनमा अर्की युवती देखा परिन् । रसेल र जेमीलाई रोकेलगत्तै उडको जीवनमा अर्की महिला देखा परिन्- कलिका म्याकिन । लसभेगासस्थित नाइट क्लबमा वेट्रेसका रूपमा कार्यरत कलिकालाई उडले आफ्नी श्रीमतीपछिको प्रेमिकाको दर्जा दिएका थिए तर जब उडका प्रेमिकाहरू देखा परे उनले आफू उडको यौन मायाजालमा फसेको महसुस गरिन् । उनले तत्काल उड र आफूबीचको सम्बन्धका बारेमा कुनै चर्चा गर्न चाहिनन् ।
कलिकाको चर्चा सेलाउन नपाउँदै उडको जीवनमा अर्की महिला देखा परिन् । रेस्टुराँको म्यानेजरका रूपमा कार्यरत मिन्डी लिउटनले आफू र उडबीच भएको यौनसम्पर्कका बारेमा द सन् पत्रिकालाई यसरी बताइन् कि उनको भनाइले उड मानसिक रूपमा यौनरोगी रहेको देखियो । मिन्डीले भनिन्— उड एकान्त स्थलमा यौनसम्पर्क गर्न चाहन्थ्यो । एकपटक उसले मलाई चर्चको कार पार्किङमा यौनसम्पर्कको प्रस्ताव राख्यो र हामीले त्यहीं यौनसम्पर्क राख्यौं । ऊ सधैं असुरक्षित यौनसम्पर्क राख्न चाहन्थ्यो र उसले मलाई रातो रंगको पेन्टी लगाउन आग्रह गथ्र्यो, जसले उसलाई यौनसम्पर्कमा बढी आनन्द दिने कुरा बताउँथ्यो । फ्लोरिडाको एक क्लबकी वेट्रेस जुली पोष्टल उडकी अर्की प्रेमिकाका रूपमा देखा परेपछि उडको वैवाहिक जीवन तहसनहस हुने स्थितिमा पुग्यो । जुली २० वर्षकी हुँदा पहिलो भेट उडसँग भएको थियो । पहिलो भेट भएकै दिन उडले आफूसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको बताइन् । उडको जीवनमा एकपछि अर्को गर्दै महिलाहरू आउन थालेपछि आफ्ना श्रीमान्को बचाउमा केही समय लागे पनि प्रेमिकाहरूको संख्या दिन-प्रतिदिन बढ्दै गएपछि श्रीमती उड पनि हतास भएकी छिन् । उनले आफ्नो श्रीमान्को परीक्षा लिन गल्फ छोड्न आग्रह गरेकी थिइन् । उडले पनि आफ्नी श्रीमतीको मन जित्न गल्फ प्रतियोगिता खेल्न छोडेको घोषणा गरे, तर महिलाहरूको संख्या बढ्दै गएपछि एलिनले उडसँग पारपाचुके गर्ने घोषणा गरिन् । आगामी क्रिसमस बच्चा र उसको बाबुसँग बिताउने र त्यसको लगत्तै पारपाचुके गर्ने घोषणा श्रीमती एलिनले गरेकी छिन् । स्वीडिस मोडल एलिनले अहिले स्वीडेनको राजधानीबाट ४० किलोमिटर टाढा एउटा घर किनेर त्यही बस्ने सोच बनाएकी छिन् ।
उडसँग प्रेमीकाहरूको सेक्स अनुभव
जेमी जंगलर ः २६ वषर्ीया जेमी लस भेगासस्थित एक बारमा ककटेल बनाउने काम गर्थिन् । अन्डरवेयर मोडलसमेत रहेकी जेमीसँग उडको भेट सन् २००५ मा भएको थियो । भेट भएकै दिन उनीहरूबीच लगातार दुई घन्टा यौनसम्पर्क भएको थियो । उक्त यौनसम्पर्कबाट आनन्दित भएपछि त्यसको केही दिनपछि नै उडले उनलाई सिकागो लगे । जहाँ उडले आफ्नो पिताको देहावसानको खबर आएकै दिन पनि लामो यौनसम्पर्क राखे । जेमी उडकी चौथो प्रेमिकाका रूपमा सार्वजनिक भएकी थिइन् ।
जुली पोस्टेल ः उडकी एघारौं प्रेमिकाका रूपमा जुलि पोस्टेल देखा परिन् । २० वर्षकी हुँदा उडसँग उनको पहिलो भेट भएको थियो । ओरल्यान्डोको एक नाइट क्लबमा ककटेल वेट्रेसका रूपमा काम गर्ने क्रममा उनको उडसँग भेट भएको थियो । उडले जुलीलाई मन पराएको तर एलिनसँग विवाह गरेर सामाजिक रूपमा दबाब झेल्न मात्र खोजेको बताएका थिए । उडले मोबाइल एसएमएस गरेर यौनप्रस्ताव राख्ने गरेको कुरा जुलीले सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
होली स्यामसनः अश्लील चलचित्रकी नायिका होली स्यामसन टाइगर उडकी सातौं प्रेमिकाका रूपमा देखा परेकी छिन् । ३६ वषर्ीया स्यामसनले उडको जन्मोत्सवमा उनलाई ल्याप डान्स देखाएको र सोही रात यौनसम्पर्क राखेको बताइन् । उनले उडसँगको पहिलो यौनसम्पर्क ४५ मिनेटको भएको र यौनसम्पर्कका बेला उड मुस्कुराइरहेको बताएकी छिन् ।
मिन्डी लिउटन ः ३३ वषर्ीया वेट्रेस मिन्डी उडकी पाँचौं प्रेमिकाका रूपमा देखा परेकी छिन् । मिन्डी भन्छिन्- उड पीडादायी यौनसम्पर्क राख्ने स्वभावको छ । यौनसम्पर्कका बेला उसलाई मेरो केश तान्दा र शरीरमा हिर्काउँदा आनन्द आउँथ्यो । ऊ एकान्त स्थानमा यौनसम्पर्क राख्न चाहन्थ्यो । एकपटक हामीले चर्चको कारपार्किङमै असुरक्षित यौनसम्पर्क राखेका थियौ ।
जेमी ग्रुब ः टेलिभिजन रियालिटी शोकी प्रस्तोता जेमी उडकी तेस्रो प्रेमिकाका रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन् । उनले उडले आफूलाई निर्वस्त्र फोटो खिचेर एमएमएस गर्न लगाउने गरेको बताएकी छिन् । टाइगर उडका प्रेमिकाहरू
१. रसेल उचिटेल, ३१ वर्ष, भीआईपी होस्टेस
२. कालिका मोकिन, २७ वर्ष, क्लब एक्जिक्युटिभ
३. जेमी ग्रुब, टिभी रियालिटी स्टार
४. जेमी जंगलर, २६ वर्ष, ककटेल वेट्रेस
५. मिन्डी लिउटन, ३३ वर्ष, वेट्रेस
६. कोरी रिस्ट, ३१ वर्ष, हुटर
७. होलि स्यामसन, ३६ वर्ष, अश्लील चलचित्र नायिका
८. जोस्लिन जेम्स, अश्लील चलचित्र नायिका
९.जुलि पोस्टेल, २५ वर्ष, ककटेल वेट्रेस
१०. लोरेडाना जोली, कल गर्ल
११. थेरेसा रोजर, ४० वर्ष
Filed under: Entertainment « तिमी मेरो नलेखिएको प्रेमपत्र पूजना भलिउडमा »